Chakanakisa Cherechedzo YANDAKAGAMUCHIRA pane yangu Blog | Martech Zone
Iyo Yakanakisa Cherechedzo YANDAKAGADZIRIRA pane yangu Blog
Chishanu, May 18, 2007 Chipiri, Gunyana 4, 2011 Douglas Karr
Yangu blog yakaunganidza zvakaringana kutarisisa mumwedzi ichangopfuura uye vanhu vanga vakanyanyisa kuva nemutsa mumashoko avo. Ichokwadi chekuti vanhu vanotora nguva yekundipa rumbidzo kana kunditenda chinotyisa. Zvinondifambisa kuti ndiedze kuisa kwakawanda kushanda mune yega yega posvo. Ndakave nemataurirwo akanaka kubva kutanga blog, asi ndinofanira kugovana tsamba ino newe. Zvakanyatsoita zuva rangu! Ichowo chipupuriro chekuti yakawanda sei blog inogona kuve nayo. Pamberi petsamba iyi, ini handina kana kumboziva kuti Mitch aive muverengi… tarisa tsamba yake:
Ndiri muverengi wenguva yakareba uye munyoreri weblog yako. Ini ndaida kupfura e-mail pamusoro pako kuti ndikuzivise zvandiri kuita.
Ini pachangu uye neshamwari, vese vari undergrad vadzidzi paMcGill University kuMontreal, Canada, vachangobva kuvhura kambani nyowani yepamhepo inotsigira vatengi. Isu takashandisa yakawanda dzidziso kubva kublog rako mukuvandudza iyi nyowani kambani yedu.
Kambani yedu inonzi ClixConnect uye inopa yakanyanya kuvandudza sevhisi yekupa online vatengi rutsigiro Zvatinoita ndezvekupa kunze kwekushambadzira live-chat sevhisheni yewebhusaiti dzevanhu (uchishandisa zvidiki zvekurarama-mabhatani mabhatani aunoona pane mawebhusaiti). Varidzi vewebhusaiti vanogona kupindura kumibvunzo yekutaura pavanenge varipo, uye kana vasipo, mumwe munhu anobva kunzvimbo yedu yekufona anozopindura mibvunzo kwavari, 24/7/365.
Ndiyo hafu yezvinhu zvitsva. Chinhu chikuru chine hunyanzvi cheClixConnect ndechekuti isu zvakare tine tekinoroji nyowani mu software yedu inogonesa otomatiki kukurukurirana kwevatengi, zvichibva pachigadzirwa chavari kuona. Saka taura kuti mumwe munhu arikutarisa t-shati tsvuku pawebhusaiti, otomatiki chat hwindo rinogona kuoneka richikurudzira bhuruu rebhurukwa kwavari.
Isu takapedza ingangoita mwedzi mitanhatu tichironga izvi, uye takashanda nevanhu muCanada, US, Romania nePakistan kuti titange.
Ini ndanga ndichida kungokuzivisa iwe kuti iko kujekesa kuri Martech Zone vatibatsira chaizvo kusvika patiri nhasi, uye tinozvitenda nemoyo wese.
Ndatenda zvakare Douglas!
McGill Yunivhesiti BCom 2008
Ndiri kubatwa zvechokwadi! Tsamba inoshamisa zvakadii. Ini handikwanise kukuudza kuti kuverenga zvakadii iko katsamba kwaireva kwandiri. Neraki rakanaka ne Clixconnect, Mitch! Ndiri kuenda kunoongorora kunyorera kwako uye ndicharamba ndichiedza kuyedza kukuunzira zvemukati zvinobatsira!
Bow Vanokanda, Kubloga, uye Kutaurirana
May 18, 2007 pa 9: 06 AM
Izvo zvinotonhorera, kunyanya kubva kumudzidzi. Mwedzi 18 yapfuura mumwe wevashandi vangu akaenda kuGraduate School muEurope. Akashanya mavhiki mana apfuura uye akandiudza kuti PR uye nzira dzebhizinesi dzandakanga ndagovana naye pabasa pano, dzakamupa mukana une simba, wemakwikwi pakati pevezera rake. Panguva iyoyo akanga asina chaaiziva.
Ndakabayiwa mwoyo nekuti murume akanaka uye achaita zvinhu zvikuru zvakawanda muhupenyu hwake.
Ndine chokwadi kuti kune vamwe vazhinji kunze uko saMitch vakapihwa simba nebasa rako.
May 18, 2007 pa 9: 28 AM
Ndatenda Neil… makomendi nemabhii akaita seaya anonyanya kukurudzira kupfuura chero bhonasi. Zvainzwa zvakanaka kuverenga izvi.
Yakawanda yeblogi rangu yakavakirwa pane zvakataurwa, saka ndinotenda kuti itsamba iyo isu tese tinogona kunzwa zvakanaka nezvayo!
May 19, 2007 pa 6: 34 AM
Kudyidzana kwandinowana kubva mukugamuchira makomendi ndicho chikamu chinopa mubairo chekunyora bhurogi rangu, uye zvinondibatsira kuedza kune zvirinani uye zvirinani zvemukati.
Inyaya huru Doug, uye chigadzirwa chavauya nacho ipfungwa yakanaka, ndingatofunga nezve kuishandisa mune ramangwana.
Ini zvirokwazvo ndashandisa akawanda ekurudziro ako pane yangu blog uye ikozvino ndave padyo nevaverengi mazana maviri (mushure memwedzi mishoma chete) pane feedburner, uye zvimwe imhaka yako.
Ramba uchiita basa rakanaka,
May 19, 2007 pa 9: 27 AM
May 21, 2007 pa 6: 34 AM
Ndinoziva kuti zvakaita kuti unzwe zvakanaka! Mhinduro dzakadai dzinogara dzichiita kuti unzwe wakakosha.
Ndine huwandu hwakanyanya hwevanyarikani pablog rangu vazhinji vavo vanonditumira email nguva nenguva uye dzimwe nguva vanobuda uye
“taura” pane dzimwe nguva tsinhiro dzavo dzine simba guru pandiri kupfuura idzo dzinobva kuvaverengi vangu venguva dzose nemhaka bedzi yokuti zvakanga zvisingatarisirwi chose chose. 🙂
Ndichangobva kuwana webhusaiti yako maminetsi makumi maviri apfuura. Ndakatoverenga nezvakawanda zvezvawatumira uye ndakaisa bookmark/yakabatana newe kuti ndigozodzoka kana ndava nenguva yakawanda.
Ndanga ndichinyatso kufunga nezve kutora bhurogi rangu kune rinotevera nhanho uye ruzivo kubva kumawebhusaiti, seako, ari kuzondibatsira mukushandura zviroto zvangu kuti zvive chokwadi.
Ndanga ndichibloga kweanopfuura makore maviri zvakadaro, zvibodzwa zvangu, mumwedzi mishoma yapfuura zviri kuchinja.
May 21, 2007 pa 6: 46 AM
Thanks Vegan Momma! Ini ndichange ndichitarisa yako saiti zvakare. Ini handisi Vegan, asi ndine ruremekedzo rukuru rwekuzvipira kunotora. Uye zvechokwadi uri Amai, basa rakaoma kupfuura mamwe ose! Ini ndiri Baba vasina murume saka ndinoedza (ndotadza) kupfeka ngowani dzese.
Ndiudze kana ndikakwanisa kukubatsira chero chinhu!
May 21, 2007 pa 7: 06 AM
Chokwadi ndinenge ndichibvunza mibvunzo. Panguva ino handizivi chekubvunza! Kushambadzira, kweblog rangu, kuchiri kutsva kwandiri. Ndinoteerera, kuverenga, uye kudzidza.
Ini ndiri single mom uye hongu ndinoziva zvauri kureva kuedza kupfeka heti mbiri. 🙂